Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal राजनीति Archives | Page4of 50 | Aafno Khabar
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ‘ओलीको कुम्भमेला’ भनेका छन् । उनले यसलाई निभ्ने बेलाको चमकका रुपमा चित्रितसमेत गरेका छन् । डा. भट्टराईले ट्वीटरमा गोदावरीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमाले...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बिहीबार सर्वदलीय बैठक बस्दैछ । संघीय संसदमा जारी अवरोध अन्त्यका लागि देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् । बैठक बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बस्ने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा संसदमा भएका...
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अस्पताल भर्ना भएका छन् । ज्वरो र खोकीको समस्याका कारण बुधबार नेता नेपाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ । नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. नारायण खड्कालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९)बमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा खड्कालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । भण्डारीले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी...
बनेपा । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ अधिवेशन संघारमा छ । अधिवेशनका लागि देशभर कांग्रेसका कार्यकर्ताको दौडधूप चलिरहेकाे छ । काभ्रेमा पनि कार्यकर्ताहरु अधिवेशनको तयारीमा लागेका छन् । अधिवेशनले गर्दा काभ्रेको काँग्रेस बनेपा नगरको नयाँ कार्य समितिका लागि पनि महोल तातेकाे...
काठमाडौं । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीले यस वर्ष पनि संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै भोलि मनाइने संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने बताउनुभएको...
काठमाडौं । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि हेरफेर भएको छ । केन्द्र र क्षेत्रबाहेक वडा, पालिका, जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर भएको हो । शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संशोधित महाधिवेशन तालिका प्रस्ताव गरेका हुन् । पदाधिकारी...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार तीन पटक बस्यो । शुक्रबार अपरान्ह बसेका तीनवटै बैठकमा एमाले सांसदहरूको नाराबाजी चलिरह्यो । एमाले फुटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका रहेको भन्दै सांसदहरूले सुरूदेखि नै नाराबाजी गरिरहे । सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न बारम्बार...
के भयो प्रतिनिधिसभाकाे पहिलो बैठकमा ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाा (एमाले)को अवरोधबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूची अनुसार बैठक अगाडि बढाएका छन् । यसअघि १५ मिनेट स्थगित भएकाे बैठक सभामुखले अवराेधकाबीच अगाडी बढाएका हुन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको...
कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग राखेर दायर रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाएर घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, शाक्यले कुलमानको नियुक्ति खारेर गरेर...